I-Hotwav W10: izici, ukwethulwa kanye nentengo - TecnoBreak | Izipesheli nezibuyekezo
InicioAmafoni ahlakaniphileI-Hotwav W10: izici, ukuqaliswa kanye nentengo
I-Hotwav W10: izici, ukuqaliswa kanye nentengo
engeza isibuyekezo sakho
Bona intengo ku-AliExpress
I-JeoPoom Universal Mobile Phone Lanyard, I-Adjustable Neck Strap Lanyard, Ihambisana nama-Smartphones amaningi(Pinki)
I-Samsung Galaxy A22 5G - I-Smartphone Yamahhala eno-6.6 Inch 128GB kanye nenguqulo ye-Violet Android Operating System ES
Izingcingo eziphathwayo ze-3G nama-Smartphones, i-5,0 Inch, i-Android OS, 4GB ROM / 32GB Extendable, Ifoni Yekhamera Ekabili Yamakhadi, I-GPS Yokusekela, i-WiFi, i-Bluetooth. (8Pro-Green)
I-Samsung Galaxy M12 Smartphone ene-6,5 Inch Infinity-V TFT LCD Screen, 4 GB ye-RAM ne-128 GB yeMemori Yangaphakathi Enganwebekayo, ibhethri le-5000 mAh ne-Fast Charge Green (ES Version)
I-Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone 6.43″ FHD + DotDisplay, 90Hz FHD+ AMOLED DotDisplay, 50MP Al Quad Camera, 5000mAh (typ) battery, Dual-SIM 4G 128GB Twilight Blue [Global Version]
Ngemva kokwethulwa kwe-smartphone ethengeka kakhulu i-T5 Pro, i-Hotwav ilungiselela enye idivayisi eqinile. Njenge-T5 Pro, i-Hotwav W10 ezayo izokhomba imakethe yama-smartphone eqinile enobunikazi bayo.
I-Hotwav W10 iyi-smartphone entsha eqinile neshibhile enoxhumo lwe-4G. Le modeli isivele iyathengiswa ku-Aliexpress. Sicela uqaphele ukuthi inani elikhonjiwe akulona inani langempela. Idivayisi izotholakala kusukela ngoJuni 27, ngentengo ezoba cishe ngama-euro angama-95 noma ama-99USD.
Ukubuyekezwa kwe-Hotwav W10
Uma sikhuluma ngobuwena, iHotwav W10 izonikwa amandla yibhethri engu-15.000mAh, eyokuqala yohlobo lwayo ephuma enkampanini. Ngokwengeziwe, ifoni izohlinzeka nge-Android 12 yakamuva ye-Google ebhokisini.
Imininingwane yobuchwepheshe ye-Hotwav W10
Igama Brand: Hotwave
Imibala etholakalayo: emnyama
Uhlobo lwe-SIM: I-Nano SIM
Uhlelo lokusebenza: I-Android 12
I-chipset: Mediatek MT6761
CPU: I-Quad core 2GHz Cortex-A53
I-GPU: I-PowerVR GE8300
Ubukhulu: amayintshi we-6,53
Ukulungiswa: 720 x 1600px
Imemori ye-RAM: 4 GB
Isitoreji sangaphakathi: 32 GB
Isitoreji sangaphandle: microSD
Ikhamera engemuva: 13 MP
I-USB: I-USB Type-C
Ibhethri: I-Li-Ion 15.000 mAh
I-Hotwav W10 kufanele kube i-smartphone eqinile ethengekayo enomklamo ohlanganisa izici zobuchwepheshe obuphezulu nemibala egqamile kodwa yakudala (owolintshi nemnyama). I-smartphone kufanele ikwazi ukumelana nezimo zemvelo ezinzima futhi ihlangabezane namazinga e-IP68, IP69K, kanye ne-MIL-STD810G.
I-Hotwav W10 inesikrini esingu-6,53-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angu-720 x 1440, esikwazi ukufinyelela ku-450 nits of brightness, kanye no-269PPI. Isikrini siyiphaneli ye-IPS futhi sinenotshi emume weconsi lamanzi phakathi nendawo. Inobukhulu obungu-168,8 x 82,5 x 15 mm, nesisindo esingamagremu angama-279. Ine-premium rubber back.
I-Hotwav W10 ifakwe i-Mediatek MT6761 Helio A22 (12nm) chip esekela izindlela zenethiwekhi ye-GSM / HSPA / LTE, enephrosesa ye-quad-core Cortex-A53 evalwe ku-2,0Ghz. Ngokuqondene nezithombe, ifakwe i-PowerVR GE8320. Ihlanganiswe ne-4GB ye-RAM kanye no-32GB wesitoreji sangaphakathi.
Imemori inganwetshwa kusetshenziswa imemori khadi futhi nokusebenza kwimodeli ye-SIM ekabili kuyenzeka.
Ngaphezu kwalokho, i-smartphone isebenzisa ikhamera yangaphambili engu-5 MP, ukwenza izithombe ozishuthe zona namakholi wevidiyo. Ikhamera yayo eyinhloko iyi-engeli ebanzi engu-13MP f/1.8 kanye nekhamera ejulile engu-0.3MP QVGA f/2.4. Ngokungeziwe kumklamo wangaphandle omuhle kakhulu, ifoni futhi inomzimba we-IP68/69K ongazweli kakhulu futhi ohlala njalo kanye nebhethri elikhulu elingu-15000mAh elinokushaja okusheshayo okungu-18W.
Lokhu kunikeza okuhlangenwe nakho okungakaze kubonwe kubasebenzisi, kungaba ukudlala imidlalo, ukubukela amavidiyo noma imicimbi yangaphandle. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokushaja okusheshayo lwe-18W luvumela ukushaja okugcwele ngesikhathi esifushane.
Ukwengeza, isenembobo kajekhi engu-3,5mm, inzwa yezigxivizo zeminwe ezibekwe eceleni, nezinzwa ezijwayelekile ezifana ne-accelerometer, i-proximity, nekhampasi. Ayinayo i-NFC kodwa ine-Bluetooth 5.0 ne-A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot kanye namashaji ngembobo ye-USB Type-C.
El I-Hotwav W10 i-smartphone entsha eqinile evela kumkhiqizo abasebenzisi abazoyifuna ngentengo encintisanayo ecishe ibe ngama-euro angama-95 noma ama-dollar angama-99, kuyilapho benikeza imininingwane yokusebenza okuphezulu. Le smartphone izoqala ukuthengiswa ngoJuni 27 lapha ku-Aliexpress.
Yasungulwa e-Shenzhen ngo-2008. hotwav yinkampani yomhlaba wonke ezinikele ekuhlinzekeni omakhalekhukhwini kanye nezinsizakalo ezithandwa kakhulu kubathengi basendaweni ezimakethe ezisafufusa. Ngemuva kweminyaka eyi-10 yokukhula, inkampani isiyibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu futhi isithole ukwesekwa nokwethenjwa isikhathi eside kumakhasimende.
Kusukela ku-R&D, ukuklama nokukhiqiza kuya ekuthengisweni nasensizakalweni yangemva kokuthengisa, i-Hotwav iyakwazi ukulawula yonke indawo yakho yezimboni. Ngesikhathi esifanayo, yenza ukuhlola okujulile kanye nezinqubo ezizuzisayo emikhakheni yokusungula izinto ezintsha zobuchwepheshe, hhayi nje ukuthuthukisa ithimba lokuthuthukiswa kwekhwalithi ephezulu nelenzuzo ephezulu, kodwa futhi nokusungula isikhungo socwaningo nentuthuko ezingeni lamazwe ngamazwe.
Inkampani izama ukuthwebula amasheya emakethe amakhulu futhi iqinise ukuthuthukiswa kwebhizinisi kwemikhiqizo ezimele futhi yathuthukisa uhlelo lwe-OEM ukuze lunikeze isevisi esheshayo nengcono kumakhasimende emhlabeni jikelele. Manje imakethe yenkampani ihlanganisa iDubai, iRussia, i-Indonesia, iMexico, iColombia nezinye izingxenye zomhlaba.
0.0 kwe 5
Iba ngowokuqala lokubuyekeza "Hotwav W10: izici, ukuqaliswa kanye nentengo" Khansela impendulo
isilinganiso sakho Ufaneleka... Perfecto Bueno Isilinganiso Akukubi kangako Mpofu kakhulu